प्रदेश–२ मा मुख्यमन्त्री को ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रदेश–२ मा मुख्यमन्त्री को ?
काठमाडौँ । देश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । प्रदेश सरकारसँगै मुख्यमन्त्रीको चर्चा पनि सुरु भएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वामगठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा मधेसवादी दलहरुको सरकार बन्नेछ । तर, एक्ला एक्लै कसैको बहुमत नपुग्ने भएकाले मिलेर जानुपर्ने वाध्यता छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर संयोजक रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कुन दलबाट कसलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिलिसकेको छैन ।
प्रदेशसभामा मधेसवादी दलले बहुमत प्राप्त गरेको हुनाले प्रतिवद्धता अनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । उनले आफ्नो पार्टीको मुख्य मन्त्री हुने गरि सरकार बन्ने दावी गरे । यादवले भने, ‘हाम्रो पार्टीबाट नै मुख्य मन्त्री बन्ने हो । तर, कसलाई सिफारिस गर्ने त्यसको विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । छिट्टै निर्णय हुनेछ ।’
राजपाको पनि दावी
तर, राजपाले मुख्यमन्त्री आफ्नै हुनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा फोरम नेपालको धेरै सांसद छन् । त्यस हिसावले मुख्यमन्त्री सोही दलको भागमा पर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री जुन दलको भागमा पर्छ, मन्त्रालय अर्को दलले थप एक बढी लिनेगरि छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए । फोरमले मुख्यमन्त्री पाउँदा सभामुख र प्रदेश गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी राजपाले पाउनेछ ।
राजपा नेपालका महासचिव एवं प्रवक्ता केशव झाले मधेस सरकार बनाउने सहमति बनिसकेको तर मुख्यमन्त्री कुन दलको भागमा पर्छ त्यसको छिनोफानो हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘सिटसँख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री पाउने हो भने स्वभाविक रुपमा फोरम नेपालले नै पाउने हो । तर त्यसका लागि पनि दुई दलको बीचमा सहमति हुन्छ । तर, सहमतिमा राजपा नेपालको भागमा मुख्यमन्त्री पनि पर्न सक्छ ।’
फोरम नेपालमा नै लर्को
फोरम नेपालबाट शैलेन्द्र साह, केन्द्रीय सदस्य करिमा बेगम र विजयकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । साह सप्तरी क्षेत्र नम्बर– २ ’क’बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । उनी पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको निकट मानिन्छिन् । केन्द्रीय सदस्य यादवले पनि मुख्यमन्त्री नछाड्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्रीमा पार्टीका कोषाध्यक्ष विजय यादव र उपाध्यक्ष लालबाबु राउतमध्ये एक जना निश्चितजस्तै रहेको एक नेताले बताए । राजपाभित्र मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर पदाधिकारीस्तरमै विवाद हुने देखिएपछि अध्यक्ष मण्डलले यस्तो उपाय गरेको हो । प्रदेश–२ को प्रदेशसभा बैठक आइतबारका लागि बोलाइए पनि राजपाले भने प्रदेश सांसदको बैठकसमेत बोलाएको छैन । फोरमले प्रदेशसभाका सांसदहरूको बैठक २० गते शनिबार जनकपुरमा बोलाएको छ । बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ ।
राजपा नेपालबाट महासचिव जितेन्द्र सोनल, मनिष सुमन, उपाध्यक्ष नवलकिशोर साह, सुरिताकुमारी साह, रानी शर्मा तिवारीको पनि नाम बाहिर आएको छ । मुख्यमन्त्री दावी गर्दा पार्टी भित्रे नै लफडा हुने भएकाले फोरमलाई दिनेगरि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले सहमति गरेको एक नेताले बताए ।
राजपामा संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्नेमा पनि विवाद छन् । प्रदेश सांसदको बैठक पनि राजपाले बोलाएको छैन । राजपाले अध्यक्ष मण्डललाई सबै जिम्मा दिने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले नेपालपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीका विषयमा फोरम र राजपाबीच आजभोलिमा सहमति हुन्छ । राजपाबाट संसदीय दलको नेता छान्ने विषयमा अध्यक्ष मण्डले निर्णय गर्छ । ’
प्रदेश नंं. २ मा संघीय समाजवादी फोरमका २९, राजपाका २५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ सांसद छन् । यहाँ मधेसवादी दल मिलेर सरकार बनाउने निश्चित छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई मुख्यमन्त्री दिनेगरी राजपा र फोरमबीच छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश २ मा १०७ सदस्य हुनेछन् भने सरकार गठनका लागि बहुमत र्पुयाउन कम्तीमा ५४ जना सदस्य आवश्यक पर्नेछ । राजपा र फोरम मिल्दा बहुमत पुग्छ । प्रदेश–२ मा फोरमका २९ र राजपाका २५ गरी ५४ सांसद छन् ।